सदरमुकाम जोगाउन सबै खोलामा तटबन्धन « Loktantrapost
सदरमुकाम जोगाउन सबै खोलामा तटबन्धन
२५ असार २०७६, बुधबार २१:४८
भद्रपुर (रासस) ः बर्षेनी बाढीको चपेटामा पर्दै आएको झापाको सदरमुकाम भद्रपुरलाई सुरक्षित बनाउन स्थानीय सबै नदीमा पाँच करोडभन्दा बढी लगानी गरेर तटबन्धन निर्माण गरिएको छ ।
शिवसताक्षीस्थित जनताको तटबन्धन कार्यक्रमको १ नं. फिल्ड कार्यालयले सदरमुकामका तीन वटा नदी मेची, निन्दा र देउनियामा चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा उक्त तटबन्धन बनाएको हो ।
सदरमुकाम नै बाढीको जोखिममा परेको हुँदा उच्च जोखिम भएका ९ स्थान छानेर रु. ५ करोड ५० लाखको लागतमा व्यवस्थित तटबन्धन सम्पन्न गरिएको कार्यालयका प्रमुख मेखनाथ शर्माले बताए । तटबन्धन गरिएको एउटा स्थान भद्रपुर–३ भाङबारीस्थित मेची नदी पारिको नेपाली भूभाग पर्दछ ।
सो तटबन्धन अनुगमन गर्न तटबन्धन कार्यालयका प्रमुख मेखनाथ शर्मा र भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवन श्रेष्ठसँगै पत्रकारहरुको टोली मेची नदीमा नाउँ तरेर मङ्गलवार भाङबारी पुगेको थियो । ‘बाढीका कारण भद्रपुरबासीले विगतमा जस्तो विस्थापित हुनु पर्ने अवस्था अब आउँदैन’, जनताको तटबन्धन कार्यालयका प्रमुख शर्मा भन्छन् ।
भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठले नगरवासी भएर पनि बर्षातको समयमा बर्षेनी घर छाडेर सुरक्षित स्थान खोज्दै हिँड्नु पर्ने पीडाबाट मुक्ति मिलेको बताउँदै बाढीको थप जोखिममा रहेका अरु स्थानमा आगामी आर्थिक बर्षभित्र तटबन्धन गरिसक्ने जानकारी दिए ।
भद्रपुर वडा नम्बर ३ की अध्यक्ष कमला थुलुङले बर्खाका बेला एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा पुग्न नाउ (डुङ्गा) प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता तटबन्धनले हटाइदिएकोमा आदिवासी गाउँमा खुशीयाली छाएको बताए ।
भारतसँग सीमा जोडिएको सदरमुकाम भद्रपुरको पूर्वी तटमा मेची नदी छ भने मध्य भागमा निन्दा र पश्चिमी भागमा देउनिया खोला रहेको छ । ती सबै नदीमा तटबन्धन गरिएपछि अब बाढीको त्रास हटेको छ ।
मेची नदीको बाढी पस्ने भद्रपुर–५ स्थित देवीवस्तीमा रु. ६४ लाखको लागतमा १४५ मिटर, शान्तिटोलमा रु. ६४ लाखको लागतमा १५६ मिटर, वडा नम्बर ३ को भचकवस्तीमा रु. ६४ लाखको लागतमा ४ वटा स्परर, वैसाबारीमा रु. २० लाखको लागतमा ७५ मिटर तटबन्धन गरिएको कार्यालयका इन्जिनियर रुपचन्द्र अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार भद्रपुरको विश्रान्तिघाटमा रु. ६३ लाखको लागतमा २१० मिटर र भद्रपुर–९ को निन्दा खोलामा रु. ५२ लाखको लागतमा १७५ मिटरको तटबन्धन गरिएको छ ।
कार्यालयले भद्रपुरको गैरीगाउँस्थित देउनिया खोलामा रु. ६१ लाखको लागतमा ५२० मिटर लम्बाई र ५ मिटर चौडाई भएको तटबन्धन निर्माण गरेपछि स्थानीय वासिन्दा यसपालीदेखि बर्खा याममा ढुक्कले आफ्नै घरमा बस्ने पाउनेमा ढुक्क भएका छन् ।
गैरीगाउँका १९ परिवारले विगत दशकौंदेखि बर्खाको समयमा बाढीबाट विस्थापित भएर नजिकैको सिंहदेवी आधारभूत विद्यालयको चिसो भूर्इँमा दुई महिना बिताउँदै आएका थिए । दाताले दिएको चिउरा र मुरै खाएर कैयन दिनरात बिताएको क्षण सम्झिदै स्थानीय धनेन्द्र लिङ्देन भन्छन्–‘सेना र पुलिसले नाउ ल्याएर हाम्रो उद्धार गर्थे र स्कुल पुर्याइदिन्थे ।’
तटबन्धन बनेपछि भद्रपुर–३ स्थित भाङवारीका १५० परिवारको खुशीको सीमा छैन । स्थानीय हावालाल राजबंशीले मेची नदीबाट बर्षेनी बाढीको भङालो पस्नाले यहाँका बासिन्दा बर्खामा यसअघि ढुक्कले निदाउन पाउँदैनथिए ।
‘पानी पर्न थालेपछि घरमा चुलो बल्दैन थियो’, भद्रपुर–२ का ६५ बर्षीय चक्रप्रसाद खवास विगतको दुःख सम्झिदै भन्छन्– ‘बाढी आउँदा ज्यान जोगाउन मध्यरातमा घर छाडेर भागनु पथ्र्यो, बल्ल चैनले बस्न पाइने भएको छ ।’
गत पुुसमा तटबन्धनको काम सुरु भएर असार १५ गते सबै काम सर्किएको भद्रपुर–३ स्थित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अनय राजबंशी बताउँछन् ।
मेचीपारिको गाउँ भनेर चिनिएको भाङबारी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजवंशी भन्छन्–‘आफ्नै रेखदेखमा दह्रोसँग ३५० मिटर लामो तटबन्धन बनाएका छौं, अब गाउँ सुरक्षित भयो ।’ सो तटबन्धनमा रु. ६० लाख खर्च भएको उनको भनाई छ ।
सदरमुकाम बचाउ अभियान अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा समेत रु. ४ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन भइसकेको तटबन्धन कार्यालयका प्रमुख मेखनाथ शर्माले बताए ।
झापाको ठूला नदी कनकाई, रतुवा, कमल, विरिङ, निन्दा, मेची लगायतका नदीमा जनताको तटबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक बर्षमा रु. ४६ करोड बजेट विनयोजन भएको थियो शर्माले जानकारी दिए ।